သကြားလုံးသူငယ်ချင်းများ Saga နှိပ်စက်ခြင်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Candy Crush သူငယ်ချင်းများ Saga ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Candy Crush သူငယ်ချင်းများ Saga ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း APK ကို
သကြားလုံးအရူးအမူးသူငယ်ချင်းများ Saga တူသောအားကစားပြိုင်ပွဲဤမျှလောက်များစွာသောလူများ၏တစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဂိမ်းများကိုအပြည့်အဝခံစားခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှိခြင်းများအတွက်ကြီးမားသောရာအရပ်ကိုယူကြပြီအဖြစ်! အချို့လူများကပင်အဖြစ်ကောင်းစွာအောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်တစ်ခုသဘောမျိုးနထေိုငျအတှကျကစား။ တယောက်တည်းသောသူသကြားလုံးအရူးအမူး Saga play နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး avid ဂိမ်းကစားသူများမှာမှန်လျှင်, ဒီဂိမ်းကသင့်အရသာ fit ပါလိမ့်မယ်။ သကြားလုံးအရူးအမူး Saga ၏တပြင်လုံးကိုစာရင်းကိုဖတ်ပါ။
Candy Crush မိတ်ဆွေများကို Saga ၏ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံ
ဤဂိမ်းတွင်အခမဲ့ဂိမ်းစီးရီးတစ်ဦးအဖြစ်ထွက်စာရင်းခဲ့ပြီးဒါဟာသို့ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းများကိုကစားရန်ကိုချစ်သောသူတို့အားကောင်းစွာအစေခံရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့လိုခငျြ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါသည်အဖြစ်ကဂိမ်းတွေအများကြီးကစားချစ်သောသူတို့အားအဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ သကြားလုံးပျက်ကျမှုအပိုချစ်စရာတွေနဲ့ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုး ahs ။ ဤသည်ချစ်စရာကာတွန်းကားတွေထက်တောင်မှ enraptured ဖြစ်ပါသည် 3D ဂိမ်း။ ဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုအခြားကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဖြတ်ကူးရန်တရာအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ပျင်းလာပြီနှင့်အမျှအများကြီးလိုအဖြစ်ပျော်မွေ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားကျိန်းသေရှိ၏အခွင့်အလမ်းပင်မရှိ။
Candy Crush Saga နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းဗျူဟာ
ဒါကြောင့်သကြားလုံးအရူးအမူး Saga သူငယ်ချင်းများကိုသငျသညျအပိုဆုလာဘ်များနှင့်အရာ '' ချိုမြိန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဝင်ငွေကိုကူညီလိမ့်မယ်ထားတဲ့လှည့်ကွက်အချို့ကိုအထူးမျိုးမ! '' ဘုရားသခငျ့နှင့်အရသာ! ' ဤစကားများအားအစစ်အမှန်အတွက်ပိုက်ဆံဝင်ငွေထက်ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေး။ တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အထိဖြည့်နေစဉ်, သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအကြားအဆင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရမှတ်၏အကျိုးကိုလည်းမရှိ။ ဤသည်အလွန်ဂိမ်းနှင့်လူပေးနိုင်ပါတယ်ထားတဲ့အခြားအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, လူတွေသော်လည်းကစားကြကုန်အံ့ရာသည်၎င်း၏ရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးတည်းဖြစ်၏ ဒီဂိမ်းကိုမဆိုဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုမရှာပါဘူး။
အဲဒါကိုချည်ထားကြသည်မျှ app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါသည်။ ချဂိမ်းထွက်ဖို့အချိန်အခါဂိမ်း၏အခြေခံနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်တကယ်နားလည်ရပေမည်။ ဤဂိမ်းတွင်အမှတ်တံဆိပ်, သကြားလုံးများတစ်ခုလုံးကိုစီးရီးအသစ်တခုပဟေဠိဂိမ်းအဖြစ်မိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ! ၎င်း၏အားလုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့် Tiffi ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိတ်ဆွေများကိုသင်အများဆုံးသူတို့ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်အခါတိုင်းကူညီရန်ရှိရလိမ့်မည်။ တဦးတည်းပင်ထူးခြားသောတန်ခိုးနှင့်များစွာသောဇာတ်ကောင်လူတိုင်းရနိုင်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ, အခြားအဆင့်တွင်သင်နှင့်အတူတိုင်းအချိန်ဖြစ်သွားသောရွေးချယ်မှုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသသင်ပင်အရသာမတ်မတ်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ် personalize ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဂိမ်းသကြားလုံးအရူးအမူး Saga ၏အခြေခံ
ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, ဂိမ်း (တူညီတဲ့အရောင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၏) သကြားလုံး၏တူညီသောမျိုးကိုအနည်းဆုံးသုံးကိုက်ညီခြင်းအားဖြင့်အရာဝတ္ထုပစ်မှတ်ထားအကြောင်းကိုနေသောအလွန်ရှင်းလင်းမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ထားရှိမည်သိရသည်။ အတူတူသူတို့အားလုံးကိုကိုက်ညီပြီးနောက်သင်သည်သင်၏အဆင့်ကိုပြီးစီးနိုင်ပါတယ်မဟုတ်တဦးတည်းခြေလှမ်းမှားယှငျးလုပ်နေတာတောင်မှသင်ကကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ကနေအခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်ကိုသငျတို့ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ် သကြားလုံးအရူးအမူး Saga မိတ်ဆွေများက။ ဤတွင်တ္ထု၏အပြည့်အဝစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ octopuses လွတ်မြောက်
ဤသည်အရာဝတ္ထုဂျယ်လီအတွက်အဖြစ်သို့ octopuses တစည်းပစ်ပါလိမ့်မယ်။ မဆိုပိတ်မိရေဘဝဲဖို့သကြားလုံးကိုက်ညီနေချိန်တွင်ဒါ။ ဤသည်အလွှာဖြတ်မည်, ဤတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတိုင်းအလွှာကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သူတို့အား octopuses လွတ်မြောက်မယ်လို့အခါ။ သင်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုဤအပိုင်း၌, သငျသညျအနီးအနားရှိနှလုံးသားများနှင့်အတူသကြားလုံးကိုက်ညီရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့လုပ်နေပေမယ့်သင်လျော်သောမှိုသို့နှလုံးသားများစီမံခန့်ခွဲလျှင်ထို့နောက်သင့်အောင်ပွဲသေချာသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့အမည်နှင့်အဖြစ် function ကိုရှိပါတယ်အဖြစ်ဒီတစ်ခုကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသားသကြားလုံးအရူးအမူးဂျယ်လီကစားခဲ့ကြသူများသည်။ ဒါဟာသူတို့အလွန်ကောင်းစွာကဒီရည်ရွယ်ချက်မှလူသိများသေချာသည်။ သင်ဤအရာဝတ္ထုကျော်အနိုင်ရချင်လျှင်သင်ယိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့အောင်ပွဲသေချာပါလိမ့်မယ်။
သင်ဤအရာဝတ္ထုအာရုံစိုက်အခါ, သငျသညျ marshmallow တိရိစ္ဆာန်များကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်း marshmallow တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သကြားလုံး၏အလွှာမှာတွေ့ရှိသည်ဟုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကသကြားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည့်အခါဒါကြောင့်သင်ကအခမဲ့သူတို့ကိုထားမည်ကိုမည်သို့သောတိရစ္ဆာန်အဖုံးအုပ်တစ်ခုလုံးကိုအလွှာဖုံးအုပ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ cookies များကို Dunk
သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ကိုမြင်သောအခါ, Distort တစ်မြစ်ရှိသေး၏။ အဆိုပါ cookies များကို၎င်းထဲသို့ dunked ၏ပြင်လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏။ သင် cookies များကိုအောက်တွင်သောသကြားလုံး, ကိုက်ညီကြောင့်သင့်ရဲ့အောင်ပွဲသေချာဘို့ထိုသူတို့အထဲကရွေ့လျားဘို့ဖြစ်၏အခါ။
ဤသင်တန်း၏, သကြားလုံး၏အရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအများအပြားသကြားလုံးကိုက်ညီရန်ရှိသည်။ သငျသညျတတန်းလေးသကြားလုံးကိုက်ညီသည့်အခါ! ဒီအစင်းသကြားလုံးဖန်တီးပေးပါတယ်။ ကစားသမားကကိုက်ညီမည်သည့်အခါ, ဒီသကြားလုံးတစ်ဦးပြည့်စုံအတန်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါသကြားလုံး Saga မိတ်ဆွေများကိုသကြားလုံးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ထို့အပြင်နှင့်အတူလူတိုင်းကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ဒီဂိမ်းကိုတက်ကောက်နေနေစဉ်, တဦးတည်းဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ရပေမည်။ တဖန်သင်တို့ကိုအထူးသကြားလုံးဖြည့်စွက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တဦးတည်းပင်လက်ဆောင်များအပေါ်စတစ်ကာများရတဲ့အားဖြင့်ဇာတ်ကောင်စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
သကြားလုံးအရူးအမူး Saga အတွက်မိတ်ဆွေအမျိုးအစားများ
Tiffi - သင်ပင် redfish သကြားလုံးသို့သုံးကျပန်းအနီရောင်သကြားလုံးကိုဖွင့်လတံ့သောအနီ, သကြားလုံးများနှင့် Tiffi စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
Olivia - Olivia လေးကျပန်း gummy ရင်ပြင်ထိသွားသည်သော်လည်းသင်ကပင် 10 ခရမ်းရောင်သကြားလုံးစုဆောင်းလိမ့်မည်။
အနီရောင်ယုန် - သငျသညျအနီသကြားလုံးစုဆောင်းတဲ့အခါမှာ။ သို့အတွက်ကြောင့်ပူစီနံ blockers မှအပိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိ။
Odus - ဒီနေရာတွင် 8 ခရမ်းရောင်သကြားလုံးစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်ကခရမ်းရောင်အစင်းသကြားလုံးသို့နှစ်ခုကျပန်းခရမ်းရောင်သကြားလုံးသို့ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရတဲ့၏စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
မြူဆိုင်းသော - အခုတော့ဒီအခန်းမှာအသုံးပြုသူများ 10 လိမ္မော်သကြားလုံးစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မြူဆိုင်းသောစိတ်ကို blockers နှစ်ခုကျပန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Nut crackers - တောင်မှဒီတစ်ခုအတွက် 10 အပြာသကြားလုံးစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုအဖြစ်, odus တစ်လိုင်းအတွက်ငါး blockers ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
Yeti - အားလုံးထဲကအများဆုံးချစ်ရသူနဲ့အကြိုက်ဆုံး၏ Yeti ငါအချို့။ ဤအပိုင်းကိုများတွင်တဦးတည်း 12 စိမ်းပြာရောင်သကြားလုံးစုဆောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသကြားလုံးထုပ်တဲ့စိမ်းပြာရောင်သို့ကျပန်း cynan သကြားလုံးသို့လှည်အတွက် yeti ကူညီပေးပါမည်။
Coloring သကြားလုံး - သငျသညျခွောကျသကြားလုံးကိုက်ညီခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေသွားနှင့်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းများနှင့်တဦးတည်းယျြထဲမှာငါးမီ! အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရောင်သကြားလုံးပြီးသားဤမျှလောက်များစွာသောအရောင်များရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စင်းသကြားလုံး - သငျသညျကိုချွတ်သကြားလုံးရတဲ့အဘို့သင့်သကြားလုံးနှင့်ဒေါင်လိုက်လိုင်းကိုက်ညီသည့်အခါ!
ပတ်ရစ်သကြားလုံး - ဘယ်အချိန်မှာတဦးတည်းပွဲလေးသကြားလုံးတစ်ဦးက L ဒါမှမဟုတ်ဌသို့မဟုတ် T ကအသွင်သဏ္ဌာန်၌။ ဒီအလုပျကအရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အကောင့်ပေါ်မှာလူတိုင်းနီးပါးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အထုပ်ထဲတွင်ဤမျှလောက်ဖျော်ဖြေရေးပေးထားတယျ။ ဤတွင်အရာအားလုံးပြီးသားပေးထား, သင်ရုံသူတို့ထဲကတစ်ဦးအနည်းငယ်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာဆော့ကစားရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာအနိုင်ရ။ သူတို့ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံအဆင့်ကိုဂိမ်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အထုပ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းနေကြသည်ကြောင့်လေးရယ်မှဒီဂိမ်းခံစားပါ။ အရေအတွက်မတိုင်မီအရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းခဲရှိပါသည်။
စူပါ Crush စက်
မလှုပ်မရှား Pixel Crush ...
Candy Crush Saga သူငယ်ချင်းများ Candy Crush သူငယ်ချင်းများ Saga ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ကန်ဒီခရပ်ရှ်ဂိမ်း